Kedu ihe nyocha Google Analytics Cohort? Nduzi Gị Zuru ezu | Martech Zone
Kedu ihe nyocha Google Analytics Cohort? Ihe Nduzi Gị Zuru Ezu
Nchịkọta Google kwukwara n'oge na-adịbeghị anya ihe dị oke mma iji nyochaa mmetụta na-egbu oge nke ndị ọbịa gị nke a maara dịka nyocha otu, nke bụ ụdị beta nke ụbọchị nnweta naanị. Tupu mgbakwunye ọhụrụ a, webmasters na ndị nyocha ntanetị agaghị enwe ike ịlele nzaghachi oge nke ndị ọbịa na weebụsaịtị ha. O siri ike ịchọpụta ma ndị ọbịa X bịara na saịtị gị na Mọnde wee mee ka ole n'ime ha gaa leta n'echi ya ma ọ bụ n'echi ya. Google ohuru nyocha ndị otu Njirimara ga - enyere gị aka inweta ma nyochaa data a iji mee ka njikọta weebụsaịtị gị.
Kedu ihe bụ "Cohort"?
Cohort bụ okwu ejiri kọwaa otu ndị jikọtara ọnụ n'ihi otu agwa. Google jiri okwu a “cohort” kọwaa igbu oge na nchịkọta ma mepụta ụdị nke oge a nwalere iji tụlee omume onye ọrụ. Tupu e jikọtara atụmatụ ahụ na Google Analytics, ọ siri ike nyochaa ndị nkuzi dịka nke nnweta oge, mana enwere ike ịme nke a ugbu a site na iji omenala mgbanwe na ihe omume.
Otu esi eji nyocha ndi otu
Nwere ike ịnweta njirimara nyocha dị mfe n'okpuru ngalaba ndị na-ege ntị gosipụtara na akụkụ aka ekpe gị na Google Analytics. Ozugbo ị pịrị, ị ga-ahụ eserese nke okpokoro na-esote. Ezie na okpokoro nwere ike isi ike nghọta na mbu, echegbula n'ihi na m ga-eme ka ọ dị mfe nghọta. Ndabara eserese na-anọchite anya nkezi njigide ọnụego (%) nke ndị ọbịa gị pụrụ iche na ụbọchị asaa gara aga, 14, 21, ma ọ bụ 30.
Na tebụl dị n'okpuru, ị ga-ahụ na n'April 1, 2015 (ahịrị nke atọ), ndị ọrụ 174 pụrụ iche gara na weebụsaịtị ahụ, nke a ga-eji na-anọchi anya ụbọchị 0. Ugbu a, lee ụbọchị 1 na kọlụm nke atọ iji hụ ole nke ndị ọbịa 174 gara na weebụsaịtị mgbe emechara. Na Eprel 2, 2015, 9.2% laghachitere na naanị 4.02% gara na Eprel 3, 2015. You nwere ike ịlele otu ihe ahụ maka usoro nke anọ iji chọta mmadụ ole na ole ndị ọbịa pụrụ iche gara leta weebụsaịtị gị na Eprel 160, Eprel 3, Eprel 4. , were gabazie.
Enwere ike ịhụ ụbọchị asaa na ngụkọta nke ndị ọbịa 1,124 n'ahịrị nke mbụ, nke a na-anọchi anya na eserese kachasị elu.
Ruo ugbu a, ahụla m nyocha a na ọtụtụ weebụsaịtị. Emechara m kwubiri na weebụsaịtị ndị na-anaghị arụ ọrụ nke ọma n'ọfụma njin ọchụchọ ma ọ bụ ọwa ọ bụla ọzọ pụrụ iche maka iwepụta okporo ụzọ nwekwara ọnụego njigide dị ala. Weebụsaịtị ndị ahụ bara uru ma na-esewanye ahịa na-etu ọnụ na-etu ọnụ dị elu njigide. Enwere m olile anya na ị nwere ike nyochaa ọnụego njigide weebụsaịtị gị. Ma, ajụjụ na-esonụ bụ ebe a ga-esi jiri nyocha a? Azịza ya bụ na ọ kacha mma iji nyochaa weebụsaịtị na ngwa ngwa.
Nchịkọta Cohort na Ngwa Mobile
N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị bi ugbu a na-eji ama ama ma ọ bụ mbadamba ha achọ ịntanetị, ngwa mkpanaka na-aga n'ihu ugbu a. Nke ahụ na-eme nyocha omume onye ọrụ maka ngwa mkpanaka dị ezigbo mkpa iji nọgide na-eto. Ọ bụrụ n’ịche oge ole ndị ọrụ na-eji ngwa mkpanaka gị akpakọrịta, ugboro ole ndị ọrụ na-emepe ngwa ahụ otu ụbọchị, ma ọ bụ otu esi etinye ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta azịza gị niile site na ị na-eme nyocha ahụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga - enwe ihe ọmụma iji meziwanye usoro ụzọ ga - eme ka ọnụnọ ụlọ ọrụ gị dị elu.
N'otu aka ahụ, mgbe ọ bụla ị mere mmelite na ngwa mkpanaka gị, ị ga-enwe ike ịhụ ọhụhụ nke mmelite a. Ọ bụrụ na ọnụego njide gị agbadata, mgbe ahụ ọ na-egosi na ị nwere ike ị tufufu ihe ọ bụla na ndị ọrụ enweghị mmasị nsonaazụ ikpeazụ. Nwere ike iji nghọta gị na omume onye ọrụ iji mee ka mmelite na-esote ka mma. Mgbanwe ọ bụla na ngwa onye ọrụ na-eji ngwa mkpanaka nwere ike ịdebe ma wepụta ya iji gbalịsie ike gbalịa itinyekwu aka.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke nyocha otu ìgwè nke emere na ngwa mkpanaka yana ndị ọrụ 8,908 kwa izu. Dịka ị pụrụ ịhụ, nkezi njigide njigide bụ 32.35% na ụbọchị 1, nke na-ebelata kwa ụbọchị. Na data a, ị kwesịrị ịmalite ilekwasị anya na otu esi eme ka ndị ọrụ tinye aka na ngwa ahụ ka ọnụego njide na-abawanye na ọtụtụ ndị ọrụ na-emepe ngwa ahụ kwa ụbọchị. Ozugbo ọ na-ebili, a ga-enwe mgbanwe dị elu nke ịnweta ndị ọbịa ọhụụ n'ihi ọnụ ọha.
Hazi akuko Cohort Analysis
Mgbe ị mepere Google Analytics iji duzie nyocha gị, ị ga-ahụ na enwere ike ịhazi akụkọ ahụ dabere na ụdị ndị otu, otu ndị agha, usoro, na ụbọchị.
Dị Cohort - Ugbu a, ụdị beta ga - enyere gị aka ịnweta ụbọchị nnweta, yabụ ị ga - ahụ omume nke ndị ọrụ gara na saịtị ahụ na ụbọchị a kapịrị ọnụ na otu ha siri kpaa oge.
Nha ndị otu - Nke a na-ezo aka ngbanwe nke cohor site na ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọnwa. Hazigharị akụkọ gị dabere na ngalaba otu nwere ike inyere gị aka ịchọta mmadụ ole bịara eleta na Jenụwarị wee laghachi n'ọnwa Febụwarị. Mgbe ị na-ahọrọ oke ndị otu agha, ị nwere ike ịhọrọ ọnụọgụ ụbọchị nke asaa, 14, 21, ma ọ bụ 30 ụbọchị mgbe ị na-ahọrọ ogo izu.
Metric - Nke a bụ naanị otu ihe ị chọrọ ịtụ. N'oge a, metrics nwere ike ịgụnye mgbanwe site na onye ọrụ, echiche peeji nke onye ọbịa, nnọkọ maka ọbịa ọ bụla, echiche ngwa maka onye ahịa, njigide onye ọrụ, ịme ihe mgbaru ọsọ, ntụgharị, wdg. Ihe niile nwere ike ịba uru mgbe ị na-ekpebi ihe ịga nke ọma na njide gị.
Ranbọchị Ogologo - Site na nke a, ị nwere ike ịdị iche ụbọchị site ụbọchị, izu, na ọnwa dabere na ndị otu gị.
O nwekwara ike ịbụ na ị ga-enyocha nyocha ahụ n'akụkụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ilele oge nnọkọ maka ndị ọbịa na ekwentị mkpanaaka yana ndị ọbịa na-eji kọmpụta kọmpụta. Ma ọ bụ, ịnwere ike ịhazi akụkọ ahụ dabere na nnweta ndị ọbịa ọhụụ n'otu izu, dịka izu tupu Christmas 2014. Ime nke a nwere ike igosi na ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị na-etinyekwu oge na saịtị ahụ site na iji kọmputa desktọọpụ, ọkachasị tupu ekeresimesi.
Enwela nkụda mmụọ ma ọ bụrụ na nyocha nke ndị otu siri ike nghọta nke mbụ n'ihi na ị ga-ejide oge. Ọ bụ ihe bara uru nke na-enye gị ohere nyochaa nzaghachi oge nke ndị ọrụ ozugbo site na ngwa Google Analytics gị. Edmụ ihe data a nwere ike inyere gị aka imeziwanye mmezi ọhụụ na weebụsaịtị gị na / ma ọ bụ ngwa mkpanaka maka ntụgharị ndị ka mma.
Tags: Analyticschịkọbanyocha ndị otuGoogle Analyticsgoogle nchịkọta ngalaba nyochaihe bụ nyocha otu
Shane Barker bụ onye na-ahụ maka ịzụ ahịa ahịa dijitalụ maka afọ 15 na-ekwusi ike na Marketing Influencer na afọ 5 gara aga. Ọ bụ ọkachamara na ntanetị ahịa, okporo ụzọ ezubere iche na mgbanwe weebụsaịtị. Ọ kpọtụrụla ụlọ ọrụ Fortune 500, Ndị na-emetụta ya na ngwaahịa dijitalụ, na ọtụtụ ndị ama ama A-List.
Ngwaọrụ Na-eche Ihu Ahịa na Otu I Nwere Ike Isi Zụọ Ha
Etu esi ewepu uzo ahia ahia nke oma
Mee 15, 2015 na 5: 58 AM
Ihe atụ ị gosipụtara na nke a maka ngwa mkpanaka. Kedu ngwa ọ bụ?
Jul 23, 2015 na 4: 49 AM
Daalụ nke ukwuu Shane maka oge gị ịkọwa anyị gbasara Cohort Analysis. Ọ bụ n'ezie ọmarịcha ọgụgụ! Anyị natara ozi email ole na ole na-arịọ maka otu a ma anyị nwere ike inye ha njikọ gị 😉
Vijay Sharma kwuru
Mee 13, 2016 na 1: 18 AM